/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: သာသနာတျောကို ဂုဏျတငျနေတာလား၊ ဂုဏျခနြေတာလား
Posted by လင်းဦး(စိတ်ပညာ) on at Thursday, September 25, 2008
ခင်းများဆိုက်ဟာ အာလုံးအတွက် အသိပညာတွေတိုးရပါတယ်.အကိုမှာလဲဘဲ ကုသိုလ်ရပါတယ်. ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ဆက်လုပ်ပါဗျာ. အရေးမကြီးတာတွေကို ဂရူးမစိုက်ပါနဲ့ အကိုက စိတ်ထားမြင့်မြင့်နဲ့ ပရဟိတ လုပ်နေတဲ့ အတွက် စင်အောက်ကနေ ဘာအဆင့်အတန်းမရှိ ပညာမရှိတဲ့ ယောဆာ(User)လိုလူတွေအတွက်နဲ့ ခေါင်းစားမနေနဲ့ ရှင်းပြနေဖို့လဲ မလိုဘူး ရှင်းပြနေလဲ သူက လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး သူကိုယ်တိုင်လဲ ဘာတစ်ခုမှ ရေရာမှာ မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့် လုံးဝလုံးဝ ခေါက်ထားလိုက်ပါ..
User မကျေနပ်ရင် မေးကို အင်ဘိုက်လိုက်ကွာ Nayye889@gmail.com /Face book acc=samsonchen082 ထုံထိုင်းနေတဲ့ မင်းလိုလူတွေအတွက် အများအတွက် ငါ စပါယ်ရှယ် ရိုက်သွင်းပေးမယ် အိုကေတယ်နော် ဟ ဟ.